Umphakathi unelungelo lokuvezelwa okwenzeka ePhalamende - Bayede News
Umphakathi unelungelo lokuvezelwa okwenzeka ePhalamende
UGigaba: Ngabe zimhlabe inxeba zamlandela noma zibhajwe kweziludlayo?
UKUNGENA kweqembu i-Economic Freedom Fighters (EFF) ePhalamende kwashintsha izinto kwipolitiki yaseNingizimu Afrika kwenza nabantu bafuna ukwazi kabanzi ngayo baqala nokulandela izinhlelo zePhalamende. Selokhu leli qembu lingenile kulesi sakhiwo sekube nezithombe ezingezinhle ezibonakele lapho livimba khona ukukhuluma kwamalungu athile e-ANC, liphuma kuqhubeka izinkulumo nalapho amalungu alo ekhishwa ngesidlozana. Ukungahambisani noMthethosisekelo kweMithetho yePhalamende nenqubomgomo ngokuvezwa kwezithombe zethelevishini ezikhombisa ukungaziphathi ngendlela kwabasePhalamende nokuphazamisa kucaciswa ngokusobala ngaphansi koMthetho iFilming and Broadcasting okuwuMthetho owamukelwa njengosemthethweni ngowezi-2003.
Lo Mthetho uqale ukusebenza ngoLwezi wezi-2014. UMthetho uthi ukukhonjiswa kokwenzeka ePhalamende kumele kuqhubeke nakuba kukhona iqembu eliphumayo esandleni njenge- EFF, iCope, iDA ngesikhathi kusaphethe uMengameli uJacob Zuma Okunye okubekwa yilo Mthetho wasePhalamende ukuthi uma kuqubuka umsindo ikhamera yethelevishini kumele igxile kuSomlomo wePhalamende noma uSihlalo Wezifundazwe. Lo Mthetho uchaza “ukungaziphathi ngendlela ePhalamende” njengokungamhloniphi lowo osuke elawula ukuhlala kwePhalamende njengoSomlomo noma uSihlalo. UMthetho Wesibili emithethweni yePhalamende uchaza “Ukuphazamisa” njengosenzo esingamukelekile sokuziphatha kwelungu okanye amalungu Ukuhambisana noMthethosisekelo kwalokhu kwaphonselwa inselelo ePhalamende ecaleni lePrimedia (Pty) Ltd v Speaker of the National Assembly and others.
INkantolo eNkulu yasichitha isicelo esiphuthumayo mayelana nokuthi lo mthetho awuhambisani noMthethosisekelo. UMehluleli waphinda wathi kwakungekho emthethweni ukunqanyulwa kokuxhumana ngezingcingo ePhalamende nezinye izinto zezokuxhumana ngesikhathi kuneNkulumo Yobume Besizwe ePhalamende, iState of the Nation Address ngowezi-2015. IPremedia nabanye bathi lesi senzo sancisha ilungelo abantu baseNingizimu Afrika lokwazi nokubona okuqhubekayo ePhalamende. AbeHluleli uLewis, uCachalia, uTshiqi, uSwain noZondi bavumelana ngokuthi ukuvalwa kokuxhumana kwakungekho emthethweni njengoba nokusebenza kwakho kungadingeki ukuthi kuze kugunyazwe uSomlomo. Kulona lolu daba kwanqunywa ukuthi amalungu omphakathi anelungelo lokubona konke okwenziwa amalungu ePhalamende. Okunye okwanqunywa ukuthi umphakathi unalo ilungelo lokwazi ukuthi umsindo usuke kanjani ePhalamende nokuthi yilliphi lelo lungu elithintekulowo msindo.
Eyobugebengu inyakazise nePhalamende zisuka
Abehluleli banquma nokuthi umphakathi wawunelungelo lokuzwa inkulumo yesizwe ngoba iyona ehlahla indlela ngokuzokwenzeka ezweni. Ukukhuluma ngokukhululeka ePhalamende kuyinto esemqoka ikakhulukazi njengoba siphila ezweni elikhululekile.Ilungelo lokuvota wonke umuntu wakuleli lizwe onalo abantu bangalisebenzisa ngendlela ekahle inqobo nje uma bazi ukuthi labo ababakhetha ukuba bayobamela ePhalamende babakhulumela bathini. Yonke imithetho ephasiswa ePhalamende kumele kungabi ngechamile. Uma inakho ukuchema maningi amathuba okuthi ibuyekezwe noma iphonselwe inselelo ngokomthethosisekelo noma ibuyekezwe ngoba uma kunomsindo ePhalamende osuze waﬁka ezingeni lokuthi udingidwe ePhalamende kumele kwenziwe ngakho konke ukulinganisa phakathi kwendlela yokusebenza kwePhalamende nokubhekelela ilungelo labantu lokwazi ukuthi kwenzekani ePhalamende ngoba abakhona bakhethwe yiwo umphakathi.
nguNgqeshe Buthelezi Nov 2, 2018